शारीरिक शाऊल – Word of Truth, Nepal
परमेश्वरले काहिलेकाहिँ मानिसहरूलाई उनीहरूले इच्छा गरेका कुराहरू नै दिनुहुन्छ यद्यपि ती कुराहरू उनीहरूको हित विपरित हुन्छन्। परमेश्वरले उनीहरूलाई एउटा राजा दिनुभयो। परमेश्वरले उनीहरूलाई मानौं यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, “ठीक छ, तिमीहरूले जे खोज्यौ त्यही पाउनेछौ।” तिनीहरूले ___________ ____________ परमेश्वरले तिनीहरूलाई दिनुभयो, तर तिनीहरूका बीचमा _____________को _________ पठाइदिनुभयो” (भजनसङ्ग्रह १०६:१५)। त्यसैले, कुनै कुरा आफूले चिताएको अनुसार नै परमेश्वरले पूरा हुन दिनुहुँदैमा त्यो राम्रै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन।
शाऊल अल्गा थिए, सुन्दर र बलिया थिए। उनलाई एक आदर्श राजाको रूपमा हेरियो। तर यहाँ एउटा समस्या थियो। उनी आत्मिक व्यक्ति थिएनन्। शाऊल राजा शारीरिक थिए। उनी आफ्नो पापी स्वभावको नियन्त्रणमा चल्थे, त्यसकै प्रेरणाद्वारा उनी हिँड्थे। उनी आत्मिक थिएनन्। आफ्ना विचारहरूमा उनले परमेश्वरलाई स्थान दिँदैनथे। उनी परमेश्वरलाई होइन आफैलाई खुसी पार्ने मानिस थिए। बाइबलको यो भनाइ हामी कहिल्यै नबिर्सौं: “यसकारण जो ____________मा छन्, तिनीहरूले परमेश्वरलाई ______ पार्न सक्दैनन्” (रोमी ८:८)।
शाऊलको हृदय परमेश्वरतर्फ थिएन। “परमप्रभुले आफैले रूचाउनुभएको एउटा मानिस” उनी थिएनन् (हेर्नुहोस् १ शमूएल १३:१४)। उनी एक शारीरिक मानिस थिए, आत्मिक थिएनन्। परमेश्वरले खोजिरहनुभएको मान्छे दाऊद थिए, शाऊल थिएनन्!
रोमी ८:७ बाट हामी सिक्छौं, “शरीरमा मन लगाउनुचाहिँ परमेश्वरसँग ___________ गर्नु हो; किनकि शारीरिक मन परमेश्वरको व्यवस्थाको अनीनतामा छैन; किनकि यो हुन नै सक्दैन।” शरीर (आदमबाट आएको मान्छेको पापी स्वभाव) परमेश्वरको विरोधमा छ! त्यो परमेश्वरको अधीनमा बस्दैन। बरु त्यसले परमेश्वरको विरूद्धमा लडाइँ गर्दछ। शरीर परमेश्वरको अधीनमा बस्दैन। परमेश्वरको आज्ञाको विरूद्धमा विद्रोह गर्दछ, आज्ञा मान्न इन्कार गर्दछ। विद्रोह, मानिसको पापी स्वभावको अभिन्न अङ्ग नै हो।
शामूएल पन्ध्रौं अध्यायमा शाऊलको भारी विद्रोह र अनाज्ञाकारिताको बारेमा पढ्दछौं। १ शमूएल १५:३ मा परमेश्वरको आज्ञा प्रस्टै छ। के शाऊलले सो आज्ञाको पालना गरे (१ शमूएल १५:८-९)? ___________। के शाऊलले परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गरे (१ शमूएल १५:११)? ____________। तर शारीरिक शाऊलले के भने (१ शमूएल १५:१३)? _____________________________।” नबिर्सौं, आंशिक आज्ञाकारिता वास्तवमा अनाज्ञाकारिता हो।
गलाती ५:२० ले बताउँछ, “डाहा” शरीरको कामहरूमध्ये एउटा हो। त्यस सूचीमा “द्वेष” पनि उल्लेख छ (गलाती ५:२१) जसको अर्थ हुन्छ “डाहा, इर्ष्या”। इर्ष्यालु व्यक्ति अर्काको उन्नति देखेर बेखुशी बन्दछ, र अर्कासँग भएको कुरा आफ्नो निम्ति चाहन्छ।
के रिस (क्रोध) गलाती ५:१९-२१ मा उल्लेखित शरीरका कामहरूमध्ये एउटा हो? ________। शाऊलको दाऊदप्रतिको घृणा यति प्रज्वलनशील थियो कि दाऊदको पक्षमा अलिकति पनि झुकाव देखाउने जोकोही प्रति उनको क्रोध दन्कन्थ्यो। १ शमूएल २०:३० मा शाऊल कोसित रिसाए? _____________। किन? ____________________________________________। उनी मारियोस् भन्ने हेतुले दाऊदलाई ल्याउने आज्ञा शाऊलले जोनाथनलाई दिए। जोनाथनले जवाफ दिए, “तिनी मारिन योग्यका छन्? किन? तिनले के गरेका छन्?” (१ शमूएल २०:३१-३२)? प्रश्न जायज थियो। शाऊलले कसरी जवाफ दिए (१ शमूएल २०:३३)? ______________________________। याद राख्‍नुस्, जोनाथन त उनका आफ्नै छोरा थिए! फेरि पनि उनले निशाना चुकाए! हालसम्मको नतीजा: शून्यको विरूद्ध चार (चार पटकको प्रयासमा चारै पटक शाऊल ‍असफल भए)!
शरीरका कामका सूचीमा के “हत्या” पनि उल्लेख छ (गलाती ५: १९-२१)? _______
१ शमूएल अध्याय २१ मा हामी सिक्छौं, अहीमेलेक पुजाहारीले दाऊदलाई रोटी दिएर मदत गरे। त्यसबेला दाऊद शाऊल राजादेखि भाग्दै थिए। याद गर्नुस्, दाऊदलाई मदत गर्ने जोसुकै पनि शाऊलको शत्रु गनिन्थ्यो! १ शमूएल २२:१३ मा दाऊदलाई किन मदत गर्‍यौ भनेर शाऊल राजाले अहीमेलेकलाई प्रश्न गर्दा अहीमेलेकले दिएको जवाफ १ शमूएल २२:१४ मा पाउँछौं। अहीमेलेकको विचारमा दाऊद कस्ता थिए, विश्वासयोग्य कि अविश्वासयोग्य? __________________। उनको विचारमा दाऊद आदरणीय थिए कि अनादरणीय? _______________। उनका जवाफको कारण शाऊलले उनलाई भने, “तिमी ________पर्छ” (१ शमूएल २२:१६)। एकजनालाई मात्र मारेर शाऊललाई पुग्दैन, तिनले पुजाहारीहरूका पूरै घरानालाई मार्छन्।
दाऊदले मौका पाएर पनि उनको ज्यान नलिएको थाहा पाएपछि शाऊलले भनेका कुरालाई विचार गर्नुहोस् (१ शमूएल २४:१६-२१)। शाऊल रोए। उनले दाऊदलाई “मेरा ________” (पद १६) भने। उनले भने, “तिमी मभन्दा धर्मी मानिस रहेछौ। तिमीले मप्रति असल व्यवहार देखायौ, तर मैले चाहिँ तिमीप्रति खराब व्यवहार देखाएको छु” (पद १७)। उनले दाऊद नै राजा हुनुपर्छ समेत भने (पद २०)। के शाऊल दाऊदप्रति गरेका सबै व्यवहारको कारण साँच्ची नै दुःखी थिए? उनको बोली राम्रो सुनिन्छ तर त्यो साँचो थियो कि थिएन?
१ शमूएल २६:५-१६ पढ्नुहोस्। के दाऊदलाई, शाऊललाई मार्ने सुवर्ण मौका थियो? __________। दाऊदले मौका पाएर पनि उनको ज्यान नलिएको थाहा पाएपछि शाऊलले भनेका कुरालाई विचार गर्नुहोस् (१ शमूएल २६:१७-२१)। विशेष गरी पद २१ लाई हेर्नुहोस्: शाऊलले भने, “मैले ________ गरें। फर्केर आऊ, हे दाऊद मेरा छोरा। आजको दिन तिमीले मेरो प्राणलाई बहुमूल्य ठान्यौं, अब _________ ____________ म तिम्रो हानि गर्नेछैनँ।” उनले आफू मूर्ख भएको कुरासमेत मानिलिए (पद २१)। के उनले साँच्ची नै पश्चात्ताप गर्दैथिए, (अर्थात् पापको, आफ्नो र प्रभुको सम्बन्धमा मन बदल्ने काम गर्दै थिए)? कुरा त राम्रै सुनिन्थ्यो, तर के त्यो साँचो थियो?
हामीले के याद राख्नुपर्छ भने शरीर (पापी स्वभाव) ले असल रूप धारण गर्न सक्दछ अनि त्यसको बोली राम्रो सुन्न सकिँदछ, यहाँसम्म कि त्यसले पश्चात्ताप गरेजस्तै देखिन सक्दछ, तर त्यो पूरै देखावटी हुन्छ! २ कोरिन्थी ७:९-१० मा उल्लेखित “इश्वरीय रीतिअनुसारको शोक” शाऊलमा कहिल्यै पाइएन।
गलाती ५:१९-२१ मा के “टुनामुना” लाई शरीरका कामहरू मध्येमा सूचीत गरिएको छ? _________
तपाईं सोच्नुहोला: “म त शाऊलजस्तो छैनँ। म अर्कालाई भालाले हिर्काउने मान्छे होइन! म कहिल्यै ८५ जना पास्टरहरूलाई मार्ने थिइनँ ! म कहिल्यै तन्त्रमन्त्र गर्नेकहाँ जाने थिइनँ!” तर हामी नबिर्सौं, शाऊलको जस्तै शरीर (पाप गर्ने स्वभाव) हामीभित्र पनि छ! हाम्रो शरीर (पाप स्वभाव) शाऊलको जत्तिकै खराब र दुष्ट छ! अनि त्यस्तै परिस्थितिमा, उनले गरेजस्तै अथवा त्योभन्दा पनि खराब कामहरू गर्न हामीलाई बेर नलाग्न सक्छ! यही शरीर (पाप स्वभाव) नै हो जसबाट हामीलाई बचाउन ख्रीष्ट मर्नुभयो: “परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पापमय _________को समानतामा र पापका निम्ति पठाईकन गर्नुभयो र _________मा पापलाई दण्डको आज्ञा दिनुभयो” (रोमी ८:३)।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 17:15:442020-04-28 14:41:17शारीरिक शाऊल
पराई रूथदाऊदको आत्मदया